दशैंमा चङ्गा : उचाई, उमंग र स्वच्छन्दको प्रतिक – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / दशैंमा चङ्गा : उचाई, उमंग र स्वच्छन्दको प्रतिक
दशैंमा चङ्गा : उचाई, उमंग र स्वच्छन्दको प्रतिक
दाङ, २८ असोज ।शरद ऋतुको मौसम यसैपनि मादक । खुलेको निलो आकाश । वहकिने शीतल हावाको झोंका । पृष्टभूमीमा गुञ्जने मालाश्री धून । यस्तो बेला आकाशमा उन्मुक्त बत्तिइरहेका रंग–विरंगी चङ्गा देख्दा कसको मन उमंगले भरिदैन ? कसको मन फुरुंग हुँदैन ?
खेतबारीमा लहलह धान झुलिरहेका छन् । कान्ला–कान्लामा सायपत्री फूलको थुँगा लाग्दैछ । अर्थात दशैंले घर–आँगनको संघार टेकिसकेको छ । त्यसैले त आकाशभरी रंग–विरंगी चङ्गा उड्न थालेको छ । नभए त, दशैंको रौनक नै कहाँ सुरु हुन्छ ।
चङ्गा र दशैं एकअर्काको पर्याय झै लाग्छ । चङ्गा नउडेसम्म दशैंको रंग नचढ्ने, दशैं नआएसम्म चङ्गाको खेल सुरु नहुने । जसै दशैं आउँछ, आकाशमा चङ्गाहरु उड्न थाल्छ । आखिर के छ चङ्गासँग दशैंको नाता रु
चङ्गा उडाउनुसँग धेरै अर्थ जोडिएको छ । यसलाई प्रतिक एवं विम्बको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । त्यसैपनि शरदीय वायुमा चङ्गा उडाउन सहज । त्यसमाथि दशैंको फुर्सद । यो एउटा रमाइलो गर्ने वा मनोरञ्जन लिने माध्याम पनि हो । दशैंको मुडमा खुला चौर वा छतमा गएर चङ्गा उडाउनु कम्ता रमाइलो हुन्छ?
यो विश्वकै आकासमा उड्छ । हामीकहाँ यसको धार्मिक कथन पनि छ, जसअनुसार ‘वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रसमक्ष खेतीबालीको लागि हामीलाई पानी पुग्यो भन्ने सन्देश पु¥याउन चङ्गा उडाउने प्रचलन सुरु भएको हो ।’
Previous: नेपाल पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा, भारतसँग भिड्ने
Next: राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई सरकारले जनही पाँच लाख दिने